Sidee inuu ka soo kabsado Lugood playlist in Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
Sidee inuu ka soo kabsado Lugood Playlists on PC Windows
> Resource > Lugood > Sidee inuu ka soo kabsado Playlists Lugood on PC Windows
"Waxaan soo guuriyeen Lugood Library in drive dibadda ka dibna ku raran yihiin in computer cusub. Heesaha oo dhan ay jiraan laakiin dhammaan playlists ku baaba'aan. Waxaan isku daynay threads qaar ka mid ah, laakiin weli ma soo kaban karto Lugood playlist. Aanan rabto in ay kharash ah waqti dheer in mar dambe la abuuro playlists cusub. suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado, kuwaas oo playlists Lugood? Fadlan caawi PC, Windows 8. "
Sida user ee kor ku xusan, laga badiyay oo dhan playlists aad Lugood kac ahayn? Waxaa inta badan ka sahlan in ay dib u heeso halkii playlists Lugood. Ha ahaatee, ha ka welwelin! Waxaad soo kaban karto, playlists Lugood haddii aad iyagoo synced in aad iPhone, iPod, ama iPad ka hor laga badiyay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in aad raacdo tallaabooyinka hoose. Kaliya 3 tallaabo, waa inaad u samaysaa doonaa.
Tallaabada 1. Download Wondershare TunesGo
No arrin aad PC waxaa socda in Windows 8, Windows7, Windows XP, ama Windows Vista, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi TunesGo ku yaal. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows, kuwaas oo ka hawlgala nidaamyada. TunesGo waa qalab kaa caawinaya in aad samayn kabashada playlist Lugood. Waa a virus app lacag la'aan ah.
Tallaabada 2. Isku qalab macruufka la PC
Connect aad macruufka qalab, iPhone, iPod, ama iPad in aad synced playlists Lugood in la PC. Burcad TunesGo. Tani Lugood kabashada playlist app lagu ogaan doonaa qalab macruufka ah oo ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn. Hadda TunesGo si buuxda u taageersan iPhone 5s, iPad mini, iPod xiriiri 5 iyo 4, iPhone 4s, iPhone 4, iwm faahfaahsan info, fadlan iskaan Creech casriga ah ee TunesGo ah .
Tallaabada 3. Ladnaansho playlists Lugood
On uu furmo suuqa ugu weyn, dusheeda bidix, waxaad ka arki kartaa shay sida "Playlists" magacaabay. Waxaad riix kartaa saddexagalka waxaa ku hoos si aad u aragto oo dhan playlists ah. Markaas on suuqa kala saxda ah, dooro Lugood playlists aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in". In liiska "Dhoofinta in" hoos-hoos, dooro "Dhoofinta in Lugood Library". Taasi waa!
Fiiro gaar ah: mid playlists aad aragto, qaar ka mid ah waa playlists aad abuureen qalabka macruufka aad. Xaaladdan oo kale, markii kabsaday playlists Lugood, waa in aad dooranaysaa mid ka mid ah si ay u dhoofiyaan sida ay baahidaada.
Tani waa sida inuu ka soo kabsado playlists Lugood ka iPhone, iPod, iyo iPad. Waa mid aad u fudud, soo maaha? Dhab ahaantii, ka sokow playlists, la TunesGo, waxa kale oo aad kartaa in la soo celiyo dhammaan faylasha warbaahinta u Lugood Library . Waa maxay sababta aan kala soo bixi TunesGo in ay isku day ah hadda!
Waxaa laga yaabaa inaad danaynaysaa in aad ka
Photos ka iPad takhalusid Si fudud
Photos lagala soo iPhone in PC
Koobiyo Videos ka iPad in PC
Best Lugood bedelka Mac OS X
Best Lugood Saaxiibkii in ay kor u dhig maxay Lugood ma aan samayn karo
Lugood Data Recovery: Xulo Ladnaansho iDevice ee Data ka Lugood
3 Hababka si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S
Ma fariimaha qoraalka ee kaabta Lugood / Notes? Sida loo soo celi?
Sida loo dhoofiyo Lugood playlist la Music Files
5 Talo in maskaxda lagu hayo dhiska Your Library
Sida loo Masax qoraalada iPad ee Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan iibsaday Items ka iPad in Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan Grooveshark in Lugood